Cristiano Ronaldo ayaana ka dulqaaday Neymar madaama uu ku riyoonayo Bernabeu. – Walaal24 Newss
February 15, 2018	1	By walaal24
Ugu yaraan, taasi waa waxa ay ka filayaan Real Madrid iyo PSG.
Sababtoo ah waxay filayeen. Tani waxaa loola jeedaa inay ahaato habeen habeenkii ah Neymar, oo ah ninkii ugu weynaa ee Ronaldo, wuxuu Ronaldo u sahli lahaa marxaladda ugu weyn. Ciyaaryahankii ugu qaalisanaa adduunka ayaa u fiicneyd sida ugu fiican adduunka.
Laakiin Cristiano Ronaldo ayaa dib ugu soo laabtay sanadkaan si uu Real Madrid ugala soo wareego wareega quarter-finalka Champions League. 33 jirkaan ayaa xilli ciyaareed xun ku kacay, laakiin marka ay timaado kulamada ugu waa weyn, ma jirto cid ka fiican inay kooxdaada heyso.
Real madrid 3 – 1 PSG Garoomkana Bernabeu.
Real ayaa si tartiib ah u bilaabatay iyadoo PSG ay hogaanka ku qabatay iyadoo Adrien Rabiot uu hogaanka u dhiibay. Neymar ayaa ciribtii dib u cadeeyay xiddiga heerka caalami ee dalka France, waxaana uu si dhaqso ah u barbar dhigay sida Ronaldo uu uga carooday fursadii uu goolka u dhaliyay daqiiqado ka hor.
Xilligan, waxay 1-0 ku dhufatay Neymar.
Laakiin markaa Ronaldo ayaa fursad dahabi ah u soo bandhigay heerka dhibcaha. Toni Kroos ayaa lagu soo tuuray sanduuqa, Madrid ayaana si lama filaan ah fursad loogu siiyay inay ciyaarta dib ugu soo celiso 1-1.
Ronaldo ayaana sameeyay. Iska ilow in uu heysto laba kubbadood oo kubbadda. Xiddiga reer Portugal ayaa soo afjaray Alphonse Areola, isagoo u riixaya geeska bidixda.
Neymar, dhamaadka kale, indhahiisa ayuu xiiray. 1-1, inta u dhaxaysa kooxaha iyo talisyada.
Labada kooxood waxay u muuqdeen kuwo ku faraxsan barbar dhac markii ay ciyaartu gaartay marxaladdii xiritaanka. Real ayaa ku qarashgareysay, PSG ayaana ku faraxsan inay xirto dukaanka.
Ka dibna Ronaldo wuxuu ahaa dhex dhexaadin weyn.
Ciyaaryahankii hore ee Manchester United ma ahan ciyaaryahanka shan sano ka hor. Waxa uu lumiyay inta badan jaaniskiisa iyo qaar ka mid ah garsoorayaasha uu horey ugu soo ciyaaray xirfadiisa ciyaareed.
Laakiin marka ay timaado gooldhalinta, waxa uu weli yahay mid halis ah.
Ronaldo ayaa maareynayay jilibkiisa. Areola ayaa kudhawaaday goolkii Marco Asensio, xiddigga Real Madrid wuxuu joogey waqtigii ugu fiicnaa ee uu kubada ka fariistay.
Iyo, in sidaas la sameeyo, wuxuu baray casharka PSG.
Kooxda Ligue 1 ayaa ku fakartay inay taasi aheyd waqtigeedii. Neymar, waxay shaki ku jiraa inay heystaan ​​awood ku filan oo ay ku dheehan karaan garoon kasta oo kubada cagta caalamka ah.
Ama kaliya garoon kasta. Sababtoo ah Bernabeu ayaa leh Ronaldo. Waxa laga yaabaa inuu da ‘weyn yahay, waa uu ku siijecsanaan karaa, lakiin waxa uu weli yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican kubada cagta adduunka. Iyo mid awood u leh inuu kor u qaado marka kooxdiisa ay u baahdaan inta badan.
Neymar, aad wax badan baad baraneysaa.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed oo maanta gaaray degmada Diin-soor
Shacabka Turkiga oo saaka u dareeray doorashada Madaxweynaha iyo kan Barlamaanka